5 Sababood Oo Cristiano Ronaldo Uu Uga Tegayo Real Madrid? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
5 Sababood Oo Cristiano Ronaldo Uu Uga Tegayo Real Madrid?
(15-11-2017) Cristiano Ronaldo ayaa la sheegay inuu ka tegayo kooxdiisa Real Madrid, taas oo uu ka diiday inuu heshiis cusub u saxeexo.
Ronaldo ayaa ka cadhaysan shan arrimood oo aanu jeclaysan oo uu kala kulmay Real Madrid intii ka dambaysay dhamaadka xili ciyaareedkii hore.
Shabakadda ciyaaraha Cadalool ayaa waxay halkan kusoo bandhigaysaa shan arrimood oo uu ka gadooday Ronaldo.
Warbaahinta Spain: Warbaahinta Spain ayaa si aad ah u qaadaa dhigaysa warka sheegaya in Ronaldo uu doonayo inuu ka tago Spain. El Chiringuito iyo AS ayaa daabacay in ciyaartoygani uu tegayo, waxaanay boggooda hore ku daabaceen cabashooyin dhawr ah oo uu laacibkani tirsanayo. Ronaldo oo Real Madrid kula jira qandaraas soconaya illaa 2021 ayaa waxay warbaahintu si aad ah u buunbuuniyeen lunsi cashuureed iyo qaab-ciyaareedkiisa oo hoos u dhacaya, taas oo uu ciyaartoygu ka gadooday.
Ixtiraam La’aan: Sida ay sheegtay AS, Cristiano Ronaldo kuma dareemo Real Madrid qiimihii uu berigii hore lahaan jiray, waxaana uu la mid noqday ciyaaryahannada kale, taas oo ka mid ah sababaha dabada ka riixaya in uu kooxda horyaalka Yurub haysata ka dalbado in la fasaxo. Ronaldo ayaa u sheegay madaxweynaha Real Madrid sida uu wargeyska AS qoray, in uu doonayo in uu ka dhaqaajiyo naadiga. Ronaldo waxa kale oo uu ka dalbaday Madaxweynaha maalmo ka hor in meesha laga saaro lacagta lagu fasixi karo oo dhan 1 bilyan oo Euro, taas oo aanay kooxina u babbac dhigi karin.
Ronaldo wuxuu ka cadhooday isku-daygii Real Madrid ee Mbappe: Cristiano Ronaldo ayaa dareemay in aan la ixtiraamaynin markii ay Real Madrid isku dayday inay heshiis la gasho Kylian Mbappe xagaagii ka hor intii aanu ku biirin PSG. Real Madrid waxay ku dalbatay Mbappe lacag dhan 140 milyan oo Euro, markaas oo Ronaldo uu bilaabay muranka iyo khilaafka tegistiisa, sababtoo ah, waxa suurtogal ahayd in Real Madrid ay fasaxdo haddii ay heli lahayd Mbappe. Waxa intaa dheer, Ronaldo waxa uu ka cadhaysan yahay wararka sheegaya in Real Madrid ay doonayso laacibka reer Brazil ee Neymar.
Mushahar Kordhin: Real Madrid waxay usoo bandhigtay Ronaldo heshiis cusub, laakiin laacibka reer Portugal ma soo dhoweynin, sababta ugu weyna waxay tahay in Ronaldo uu doonayo in laga dhigo ciyaartoyga ugu mushaharka badan dunida, taas oo aanay Real Madrid diyaar u ahayn. Ronaldo waxa uu sannadkii mushahar uga qaataa Real Madrid, 21 milyan oo Euro, halka Messi uu qaato 35 milyan oo PSG ay siiso, balse waxa kasii badan Leo Messi oo 40 milyan sannadkii ka qaata Barcelona, taas oo heshiiska cusub u kordhiyey lacagta.